wararka maanta-arlaadii.net » Wasirka Dastuurka Mudane Xoosh oo sheegay in wasiir Xil haayo isu soo Sharaxi karo Jagada Gudoomiyaha Baarlamanka
Wasirka Dastuurka Mudane Xoosh oo sheegay in wasiir Xil haayo isu soo Sharaxi karo Jagada Gudoomiyaha Baarlamanka
Wasiirka Dastuurka Somaliya C/raxmaan Xoosh Jabriil, ayaa sheegay Wasiirada Xukuumadda ka tirsan inay isku soo sharixi karaan xilka Afhayeenka Golaha Shacabka iyaga oo aan iscasilin.
Hadalkaan ayaa wuxuu ka dambeeyay, kadib markii Gudoomiyaha Guddiga qaban qaabada Doorashada Gudoonka Golaha Shacabka uu sheegay Wasiirada is sharaxay in laga doonaayo inay iska casilaan xilalka ay hayaan.
Wasiir Xoosh oo Qoraal dood sharciyeed uu ku tiigsanaayo soo dhigay Bartiisa xiriirka Bulshada, ayaa wuxuu ku sheegay sidan.
“Qof Wasiir ah ahna Xildhibaa waa inuu iska casilaa Wasiirnimada inta uusan u tartamin Guddoomiye-nimada Golaha Shacabka ? Maya, Qodobka 59aad xarafka (c) wuxuu farayaa in shakshi xildhibaan ah uu jago dowladeed oo ka baxsan Wasiirnimo uusan qaban karin, markii uu qabtana uu jagadaas tanaasul ka yahay. Haddaba qof wasiir ah wuu tartamin karaa, isagoon is casilin, laakin maalinta Guddoomiye Golaha Shacabka uu noqdo, wasiirnimadii waa gubattaa.” Ayuu yiri Wasiir Xoosh.
Xubnaha Guddiga qaban qaabada Doorashada Gudoonka Golaha Shacabka ayaa hadda shir wuxuu uga socdaa Xarunta Villa Hargaysa ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku soo bandhigi doonaan Shuruudaha laga rabo qofka is sharaxaayo.
Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiirka Tamarta iyo Biyaha iyo Wasiir Ku xigeenka arrimaha gudaha ayaa isku soo sharaxay xilka afhayeenka Golaha Shacabka Somaliya.
Madaxweynaha Hirshabelle oo Ku Xaniban Magalada Baladweyne
Wasir Ka tirsan Xukuumada Oo is Casilay Kaaso U sharaxan Gudoomiye Baarlaman